Miyaa Droplr Qalabka Wadaagista Faylka Ugu Fiican? | Martech Zone
Sanduuqa, DropBox, Google Drive… macaamiil aad u tiro badan oo dhammaantood adeegsanaya aalado kala duwan, faylalka macmiilkaygu waa musiibo. Toddobaadkiiba mar ama wixii la mid ah, waxaan u guuraa dhammaan xogta macmiilkeyga qayb nadiif ah oo nidaamsan oo shabakad la kaydiyo ah. Maalinba maalinta ka dambaysa, inkasta, waxay ahayd masiibo la isku dayayo in la helo oo loo diro faylasha… illaa iyo hadda.
Hay'adayada aan wada shaqeynta leenahay ayaa adeegsada Droplr. Waan ku kalsoonahay inaan helo qalab kale oo faylasha lagu keydiyo, la iigama iibin markii hore. Si kastaba ha noqotee, waqti kadib waxaan jeclaaday fududaynta barnaamijkooda. Haddii aan rabo inaan la wadaago feyl, kaliya waxaan ku jiidayaa bar-keydkeyga halkaasoo laga soo raray xiriirna laga helayo. Waxaan u diri karaa xiriiriyahaas macmiilkeyga isla markaana kor u kacaya… faylka way heleen. Ma jiro daaqado furmaya, helitaanka faylal, waafajinta… kaliya soo rar oo dir. Way fiicantahay fudeydkeeda.
Wadaagista faylka Droplr ee booqashada Mac
Wadaagista Faylka Droplr ee Windows Tour:
Tilmaamaha Droplr Pro waxaa ka mid ah:
Soo qaad oo sharaxaad ka bixi shaashadaha - oo ay ku jiraan websaydhada iyo faylal badan.
Qor shaashadda si aad sawir buuxa u siiso
Isticmaal isdhexgalka xoogga leh - oo ay ku jiraan Gmail, Google Docs, Trello, Slack, Photoshop, Intercom, Sketch, Atlassian Confluence, Atlassian HipChat, Atlassian Jira, Microsoft Teams, Apple Messages, Discord, iyo Skype.
Si deg deg ah u dir xitaa faylasha waaweyn
Calaamadee faylasha aad dirto
Taabo sifooyinka wada shaqeynta kooxda
Ku samee is-halaag faylasha ama badbaadi si aan xad lahayn
Ku calaamadee faylasha aad keydiso
Ku ilaali feylashaada lambar sir ah
Abuur oo wadaag boor oo dhan maadooyinka
Eeg isdhexgalka isticmaalaha ee faylasha Drop Analytics
Calan subdomain ama domain gaar ah
Waad iska diiwaan gelin kartaa Droplr bilaash, ama waxaad u tagi kartaa lacag yar bishii (aad ayaa loogu taliyay). Droplr kaliya uma ogolaato inaad isla markiiba wadaagto feylasha, waxaad sidoo kale la wadaagi kartaa waxyaabaha ku jira shaashadda shaashaddaada. Tani waxay awood kuu siineysaa inaad xawaareyso socodkaaga shaqada oo aad xoogaa waxqabad ah dib ugu dhigto maalintaada.
Saxiix u Droplr
Fiiro gaar ah: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyaha xiriirka aan la leeyahay boostadan!
Tags: Farriimaha AppleIsugeynta AtlassianAtlassian HipChatAtlassian JiraJeexdinhoosfile sharingGmaildaaqadaha googleintercomKooxaha MicrosoftphotoshopSketchSkypedebcinTrello
Aabayaasha Maalinta Tirakoobka Ganacsiga: 5 Waxyaabaha Nooc kasta u Baahan Yahay inuu Ogaado